श्रीमतिलाई खुल्ला पत्रः बुढी, आजबाट म शन्यास लिन्छु है ? – Gulminews
Home/तपाईंका कुरा/श्रीमतिलाई खुल्ला पत्रः बुढी, आजबाट म शन्यास लिन्छु है ?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ भाद्र १, शुक्रबार १४:४५ मा प्रकाशित
सर्व प्रथम त, हेर बुढी तँलाई ब्या गरेको यतिका वर्ष पछि पहिलो पटक ले तेरा खुट्टा, शिर नुहुराएर ढोई दिुन्छु र यति शक्तिशाली अधिकार पाएकोमा बधाई पनि दिन्छु । आज भदौ एक गते विहान तँ र म विस्तराबाट उठेर चिया पियौं । त्यस पछि म बाहिर निस्कें । सदा झै घर पिएको चियाले मेरो चित्त बुझ्दैन । म बजारमा सदा पिउने चिया पसलमा पुगे ।
कार्यक्रम सञ्चालिका अदालतकै सिता घिमिरे हुनुहुन्थ्यो । अब त मैले सञ्चालिकालाई हेर्न पनि डर भयो श्रीमान भनेर जिल्ला न्यायधिश रामप्रसाद न्यौपाने ज्युलाई भने । श्रीमान सहित सहभागिहरु हाँस्नु भयो । पछि उहाँहरुको जवाफ थियो सकरात्क नजरले हेरे डराउनु पर्दैन , नियत खराबको नजरले हेरे परिन्छ । मान्छेको नजर र मनको कुरा कसरी न्यायलयले बुझ्ने होला भोली ?
वालापन मै त्यसरी जवरजस्ती हामीलाई सुत्न लागाउने विरुद्धको अत्यचार पनि हामी सहयौं, भोग्यौं । त्यस्तै तँ तेह्र कि म चौधको थिएँ होला हेर राक्षश ( सरी है हिजो साँझ सम्मको तँ संग बोल्ने बानी भएकोले राक्षस शव्द खुस्की हाल्यो, आज देखि लागु हुने कानुनमा लागु नहोस प्लीज….)
खै कुन्नी मानव स्वभाव नै त्यस्तै हो कि भन्छु म जस्तै अरु पुरुषका कुरा सुन्दा पनि । उनिहरु पनि त्यस्ता कुरामा म जस्तै राक्षश छन अ’रे । उफ….मान्छेको यो स्वाभावलाई कसरी छुटाउने हो ? परिने भयो फन्दामा । अरुको कुरा के गर्नु ? तैले पनि मलाई जिस्काउछेस , चिमोट्छेस् ।
हेर त, हाम्रै आँखा अगाडी ति जमना गए बाय । बाटो घाटो कसैसंग आँखा जुध्छ । चिने जस्तो लागेर हेरिरहन मन लाग्छ । अब त त्यसरी हे¥यो भने आशय करणीको मुद्धा लाग्ने भयो बाय हेर बुढी । आज विहान एउटी बहिनी आउँदै थिईन , मैले देखेर पनि नदेखे जस्तो गरी अगाडी बढें । हाम्रो त जमना गयो तर भाई बहिनीहरुले कसैलाई हेर्ने पाउने, मन पराउँन पाउँने , मनको कुरा ब्यक्त गर्न पाउने प्राकृति स्वभाव र अधिकार पनि छिनिन्छ कि जस्तो लाग्यो ।
कार्यक्रम सञ्चालिका अदालतकै सिता घिमिरे हुनु हुन्थ्यो । अब त मैले सञ्चालिकालाई हेर्न पनि डर भयो श्रीमान भनेर जिल्ला न्यायधिश रामप्रसाद न्यौपाने ज्युलाई भने । श्रीमान सहित सहभागिहरु हाँस्नु भयो । पछि उहाँहरुको जवाफ थियो सकरात्क नजरले हेरे डराउनु पर्दैन , नियत खराबको नजरले हेरे परिन्छ । मान्छेको नजर र मनको कुरा कसरी न्यायलयले बुझ्ने होला भोली ?
२– आज मिति … को साँझ देखि विहान घरबाट निस्कीने बेला सम्म म उहाँकी श्रीमति शकुसल र सुरक्षित छु भन्ने कागज पनि दैनिक गराउनु पर्छ । त्यसमा हामी दुवै वादी प्रतिवादी औठाछाप लगाउनु पर्छ , भोली यो हस्ताक्षर मेरो होईन भन्न पो के वेर हुन्तो ?
(भद्र १, २०७५ देखि लागु हुन लागेको नयाँ कानुन संहिता सम्बन्धि व्यंग्यात्मक लेख सुनारका निजि विचार हुन्।)